Ọ bụ Ezumike Oge Ọzọ, Nke a bụ 10 Usoro iji jirichaa nsonaazụ gị | Martech Zone
Anọ m ọdụ na kiosk dị na ọdụ ụgbọ elu nke Minneapolis na-alaghachi Indianapolis. Emechara m eme isi okwu na ConceptOne na zuru ezu na Njem Azụ ahịa Agile ma nye ndị bịara m my Mpempe akwụkwọ Azụmaahịa Ahịa. Jide otu nke ahụ ka ị na-agụ infographic a - ọ kwesịrị inyere gị aka!
Laghachi akụkọ ahụ. Anọ m na Austin na Dell n'izu gara aga na-egosi ndị otu mba ha gbasara pọdkastị, laghachi n'ụlọ, wee pụọ maka South Dakota ụbọchị ole na ole ka e mesịrị. Anọ m na-a aụ n'ikiri ụkwụ a na-echi ọnụ n'ala ka ije niile na-ehichapụ m. Na ihe niile na-aga, m rutere na South Dakota ebe ịtụnanya Korena Igodo nke Igodo Ngwọta Media chụpụrụ anyị na Black Hills na-egosi anyị saịtị ndị dị egwu. Akụkụ akụkụ - nke a nwere ike ịbụ ebe kachasị mma United States m gara, na m na mba niile.
Ka anyị na-apụ gaa ugwu ime mmanya na-atọ anyị ụtọ, ọ malitere ịjụ oyi. Ọ bụghị flake ebe a ma ọ bụ ebe ahụ… ọ na-agbadata n'ezie. Ọ mara ezigbo mma… mana ọ bụ naanị otu nsogbu.
Anọ m na-arụsi ọrụ ike ma na-eme atụmatụ na echefuru m iweta sweta ma ọ bụ uwe m! Amaghị m ihe m nọ na-eche. Kedu onye na-aga ugwu n’Ọktọba n’enweghị jaket? (Me!)
Isi m? Oge na-aga, oge eruola ka ịmalite ịmalite atụmatụ ịgba mbọ ezumike ahịa gị. Ihe omuma a sitere na Mgbasa Ozi MDG bu ezigbo ihe, 10 Ezumike ezumike ezumike dị mkpa maka 2017.
A na-atụ anya ire ahịa metụtara ezumike na United States karịrị ijeri $ 923 na 2017, ihe dịka 3% na oge ikpeazụ. Ọnụọgụgụ ahụ nwere ike ịme ọhụụ maka uru ịgba egwu n'isi gị, mana ọ na-ewetakwa nnukwu nsogbu: itinyekwu ego pụtara ịsọ mpi-na izi ozi ahịa ahịa maka ndị ahịa iji dozie. Mgbasa Ozi MDG
10 Ezumike ezumike ezumike dị mkpa maka 2017
Malite Early na Ọgwụgwụ mbubreyo
Nye n'ike mmụọ nsọ Gafee Channels
Lekwasị anya Social Media Iru Ndị Na-eto Eto Na-eto Eto
Kpọọ Onwe Gị Banyere Ezumike
Hazie Izi ozi gị
Nye Karịa ego
Mee Mobile Isi Nnukwu Ihe
Lekwasị Anya Amazon
-eme ka alaghachi Dị mfe
Nke a bụ ozi ederede zuru oke na ụfọdụ nkwado na-akwado nkwado na nkọwa:
Tags: amazonCommerceegoecommerceezumikeezumike ahịa usorongwa ahiamsg mgbasa ozikeonwealaghachielekọta mmadụ media
Ọkt 17, 2017 na 2:50 AM
Daalụ maka òkè Douglas!
Nwere ike itinye ụfọdụ n'ime usoro ndị a n'oge "oge ezumike"?
Ọkt 27, 2017 na 9:21 AM
Kpamkpam, Filip! Echere m na izipu ozi na ahaziri iche iji gosipụta oghere dị elu, pịa, na ọnụego ntụgharị. Na, nhazi ndi mmadu nile bu ihe agbakwunyere. Daalụ nke ukwuu maka ịza ajụjụ!